Bilaogy LGBT Iray Naato Fa Niresaka Tobin’Asa An-terivozona Tao Kiobà Nandritra Ny Taompolo 1960 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2016 13:42 GMT
Nanambara tao amin'ny kaontiny Twitter ilay bilaogera Kiobàna malaza Yasmin Silvia Portales Machado tamin'ny fiandohan'ny volana Febroary fa nosivanin'ny Reflejos, tranokalam-panjakana Kiobàna mampiantrano azy, ny bilaogy Proyecto Arcoiris (Tetikasa Avana) :
Miantsoantso aho androany noho ny sivan'ny CubaVa tamin'ny bilaogy LGBT ao Kiobà @ProyectArcoiris 😾 #hijab @Negracubana @camiloglt @lrpbyzard
Ny sombin-dahatsoratra voasivana dia ampahany amin'ny lahatsoratra “Con el perdón (o no) de Mariela Castro“, “izay midika hoe “Amin'ny famelan-keloka (na tsia) avy amin'i Mariela Castro”, ary nosoratan’ ilay mpikambana sady mpikatroka ao amin'ny Arcoiris, Jimmy Roque Martínez. Ao amin'ny lahatsoratra, alalinin'i i Roque Martínez ny lahatsary fanadihadiana HBO momba an'i Mariela Castro Espín, talen'ny Foibem-pirenena Kiobàna ho an'ny Fanabeazana ara-pananahana (Cenesex) sy ny zanakavavin'ny Filoha Kiobàna Raúl Castro. Ao amin'ny horonantsary, naseho tamin'ny Fetiben'ny Filma tamin'ny herintaona, dia niresaka ireo toby mbola niasa fony mbola minisitry ny Tafika Kiobàna ny rainy i Castro Espín.
Tsy fantatro hoe nahoana no “manala baraka ny Revolisiona” izany, araka ny voalazan'ny didim-pitsarana navoaka ho anay. Ny hany fanazavana nomen'ny [ mpiasam-panjakana nandefa ny filazana sivana] dia na dia fanta-daza aza ny [nataon'ny UMAP], dia tsy azo avoaka ao amin'ny http://cubava.cu izany.
Reflejos, izay mamaritra ny tenany ho “bilaogim-pianakaviana Kiobana,” dia manangona ireo bilaogy nosoratan'ireo manerana ny nosy ary hany tokana manome ity tolotra ity ao Kiobà. Azo jerena amin'ny anaran-tsehatra cubava.cu izy ary ny Klioban'ny Tanora mikirakira ny Solosaina sy Elektronika (JCCE), sampan'ny Minisiteram-pirenena misahana ny Serasera no tompony. Ny tanjon'ny tranokala dia “ny iasany ho fitaratra ahafahan'ny Kiobàna miray hina amin'ny tanjona sy tombotsoa iombonana.”
Azo hidirana avy any ivelany ny Reflejos, saingy tsy azo atao ny mamorona bilaogy avy any ivelan'ny nosy, ary tsy mety koa ny mitantana azy avy any ivelan'ny firenena na dia noforonina tao Kiobà aza. Mba hihazonana bilaogy ao amin'ny Reflejos, dia tsy maintsy misy olona iray miditra ao avy ao Kiobà ary monina ao amin'ny faritanim-pirenena.